बुढीगण्डकी आयोजना आँफै बनाउने सरकारको निर्णय, स्वदेशी लगानीमा यसरी सम्भव छ ! – Online National Network
बुढीगण्डकी आयोजना आँफै बनाउने सरकारको निर्णय, स्वदेशी लगानीमा यसरी सम्भव छ !
१० मंसिर २०७४, आईतवार ०१:५८
काठमाडौंः सरकारले चीनको गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलसाय युक्त बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बनाउन दिने विषयमा त्यसअघि भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले पत्रकार सम्मेलन गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । स्वदेशी पुँजीबाटै उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले तत्कालै एक समिति गठन गर्ने र सो समितिले दिएको रिर्पोटका आधारमा यसबारे विस्तृत परियोजना तयार गरिने उपप्रधान एवम् उर्जा मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता खारेज भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का दिन चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको आरोप लगाइरहेका थिए । आरोपहरु बीच सरकारले स्वदेशी पुँजीले नै उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक औसतमा रु ३२ अर्ब ५० करोड विनियोजन हुन सकेको खण्डमा आगामी आठ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा यसरी सम्भव छ
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार सो कार्यका लागि करिब रु दुई अर्ब खर्च भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आफूहरुले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गरे ।
उनले भने, ‘हामीले विगतमा नै आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । लगानीको प्रक्रिया र विधिका बारेमा समेत निर्णय गर्न भनेका थियौँ ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वित्तीय स्रोत जुट्ने गरी आयोजना तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष गुरागाईंले प्राविधिक तथा आर्थिकरुपमा सम्भव हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र आमसहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सरकारले आँट गरेर वार्षिकरुपमा रु ३० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सके स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण हुन सक्ने उनको भनाई छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजना तत्काल निर्माण शुरु हुनुपर्ने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छैनन्, सबै प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत शुरु भएको छैन’, उनले भने, ‘मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभावितले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन–तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै रु ६३ अर्ब लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउँछन् ‘ निर्णय प्राप्त भएपछी सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने निर्वाचनको समयमा आलोचनाबाट बच्न कामचलाउ सरकारले हतार हतार चुनावी ‘स्टन्ट’ गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने विषय राम्रो भए पनि कुन स्रोतबाट बजेट जुटाउने र कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने निर्धारण नगरी चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कामचलाउ सरकारले निर्णय गरेको बताए । निर्वाचन गराउने उद्देश्यमा रहेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरेको भन्दै बिनाविभागीय मन्त्री शाहीले स्रोतको पहिचान र बजेट विनियोजनका विषयमा ठोस निर्णय भए त्यो सकारात्मक हुने टिप्पणी गरे ।